‘म चितवनलाई पर्यटनको दोस्रो गन्तव्य बनाउँछु’ – Saurahaonline.com
‘म चितवनलाई पर्यटनको दोस्रो गन्तव्य बनाउँछु’
चितवन, २५ पुस । युवा व्यवसायी राजु श्रेष्ठ उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । उनी विसं. २०६४ सालबाट उवासंघमा जोडिएका हुन् । २०६४ सालमा उनी पहिलो पटक उवासंघको कार्यसमिति सदस्य बनेका थिए । श्रेष्ठ एक कार्यकाल उनी तृतीय उपाध्यक्षसमेत भएका थिए । एक कार्यकाल प्रथम उपाध्यक्षसमेत भए । उनीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
१) उवासंघ चितवनको अध्यक्षमा तपाइँले किन उम्मेदवारी दिनुपरेको हो ?
–कुनै पनि संस्था विधिको शासन र पद्धति चल्नुपर्छ । संघलाई विधिको शासन र पद्धतिमा चलाउन मेरो उम्मेदवारी हो । म संघलाई एउटा सिस्टममा चलाउन चाहन्छु । नियममा राख्न चाहन्छु । त्यसको लागि पनि मेरो उम्मेदवार अध्यक्षमा हो । म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेको मान्छे । मेरो अब जाने ठाउँ पनि अध्यक्षमा हो । राजु श्रेष्ठ व्यवसायीहरुको हकहितको लागि लड्ने व्यवसायी हो । व्यवसायीहरुको हकहितको लागि लड्न पनि मेरो उम्मेदवारी रहेको हो । म सबैको सल्लाहमा हिँड्छु । व्यवसायीहरुले नै अध्यक्षमा राजु श्रेष्ठ नै उठ्नुपर्छ भनेपछि म उठेको हो ।
मेरो १० वर्षको समय उद्योग वाणिज्य संघसँग रहेर व्यवसायीहरुको दुःखमा साथ दिएँ । व्यवसायीहरुलाई आपत पर्दा म अगाडि बढें । सुखदुःखमा मैले साथ दिएँ । यस्तो मान्छेलाई व्यवसायीहरुले अध्यक्षमा माग गरेपछि मैले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएँ । चितवनको समग्र विकासको लागि नै मेरो उम्मेदवारी हो ।
२) उवासंघको १० वर्षको अवधिमा तपाइँले केही गर्न नसक्नुभएको आरोप पनि छ नि ?
– यो आरोपको म खण्डन गर्न चाहन्छु । जस्तोसुकै आपतविपदमा पनि म व्यवसायीहरुसँगै छु । उनीहरुको सुखदुःखमा साथ दिएको छु । जुनकुनै व्यवसायीलाई गएर सोध्नूस् राजु श्रेष्ठले संघमा बसेर केके ग¥यो भन्ने कुरा खुलस्त पार्नेछन् । व्यवसायीको हकहितको लागि दिनरात म खटिएँ । घामपानी केही नभनी लागें । त्यसैले त मलाई अध्यक्षमा उठ्ने बाटो व्यवसायीहरुले नै बनाइदिए । केही नगरेको जुन आरोप ममाथि लगाइयो, यो आफैँमा गलत हो । म त दिनराज व्यवसायीहरुको हकहितको लागि लडिरहेको छु । कसरी यो आरोप लाग्यो ? म अचम्मित भएँ ।
३) तपाइँले केके गर्नुभयो ? किन तपाइँलाई मतदाताले मत दिएर अध्यक्षमा जिताउने ?
–म २०६४ सालबाट उवासंघको घरभित्र प्रवेश गरेको हो । कार्यसमिति सदस्य भएर उवासंघको घरभित्र आएँ । त्यतिबेला म सिक्नेक्रममा थिएँ । तर केही गर्नुपर्छ भनेर युवा जोशजाँगर लिएर आएको थिएँ । म इमान्दारपूर्वक व्यवसायीहरुको हकहितमा सारा मेरा व्यक्तिगत समस्या पन्छाएर लागें । आफूलाई अनुभवी र क्रियाशील बनाउँदै लगें । व्यवसायीहरुको करका समस्या हल गर्न खटिएँ । नारायणी किनारको मुहार फेर्नलाई महत्वपूर्ण भूमिका खेलें ।
लक्ष्मीनारायण बस्त्रालयलाई बिनाकारण भिराइएको भारी करको दायराबाट मुक्त गर्न निरञ्न्तर लागें । लक्ष्मीनारायण बस्त्रालय बिनाकारण भिराइएको करबाट मुक्त भयो । यसमा राजु श्रेष्ठको भूमिका कति छ, मैले भनिरहन पर्दैन । चिराक फर्मको समस्या समाधान गर्न पनि राजु श्रेष्ठ नै खटिएर लाग्यो । त्यो समस्या समाधान भयो ।
भरतपुर महानगरले लायन्सचोकको सव्जीमण्डीमा टेण्डर खुलायो । यसको खारेजी गर्न म लगातार सभा सम्मेलनमा दौडिएँ । अन्ततः महानगरले टेण्डर खारेज ग¥यो । मैले गरेका कामका सूचीहरु हजारौँ छन्, यो अन्तरर्वार्तामा भनेर साध्य पनि लाग्दैन । व्यवसायीको हकहितको लागि र चिववनको विकासको लागि राजुलाई जिताउने भनेर व्यवसायीहरु लागेका छन् ।
३) तपाइँले आफ्नो जित सुनिश्चित भएजसरी कुरा गर्नु भयो त ?
–मेरो जित सुनिश्चित भइसकेको छ । व्यवसायीप्रति मेरो ठूलो जिम्मेवारी छ । म माथि व्यवसायीहरुले ठूलो भरोषा गरेका छन् । व्यवसायीप्रति म सदैव समर्पित भइरहेको छु । व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न म ५ मिनेटमा पुग्छु । व्यवसायीहरुको हकहितमा निरञ्न्तर लड्नु भनेकै मेरो जित्ने आधार हो । न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान गर्न पनि मैले ठूलो भूमिका खेलेको छु । यसको समस्या अझै छ । व्यवसायीहरुको माया, उनीहरुलाई पु¥याएको सेवा, सुःखदुःखको साथी भएका कारण पनि पनि मेरो जित्ने आधार हो । व्यवसायीहरुलाई मैले गरेको सहयोग, सद्भाव र उनीहरुले म माथि गरेको भरोषा मेरो जित्ने आधारहरु हुन् ।
४) तपाइँले जित्नुभयो भने समग्र चितवन जिल्लालाई केके योगदान पु¥याउनुहुन्छ ?
– मेरो जित सुनिश्चत भएको छ । जितेपछि मैले चितवनलाई पर्यटनको दोस्रो गन्तव्य बनाउँछु । यहाँको पर्यटनलाई मेलै प्रमुख प्राथमिकता दिन्छु । पहिलो काम त मेरो कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नु हुन्छ । सप्तगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई मुर्त रुप दिन निरञ्न्तर लाग्नेछु । बहुउद्देश्यीय सभा हल बनाउन पहल गर्नेछु । चितवनलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउन खटिनेछु । व्यवसायीहरुको हकहितमा काम गर्नेछु । संघलाई विधिको शासनमा चल्ने बनाउनेछु । व्यवसायीमाथि हुने विभिन्न करका झमेलाबाट मुक्त पार्नेछु । नारायणगढ बजारलाई सुन्दर नगरी बनाउन पहल गर्नेछु ।
५) तपाइँको हार भएमा संघप्रति कस्तो भूमिका रहन्छ ?
चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । व्यालेटमा हामी विश्वास गर्छौ । मलाई विश्वास छ, व्यवसायीहरुले संघमा मेरो नेतृत्वलाई स्वीकार्छन् । यदि स्वीकारेनन् भने पनि व्यवसायीहरुको हकहितको लागि म क्रियाशील रहनेछु । व्यवसायीहरुलाई जहाँ समस्या पर्छ, म त्यही पुग्छु । साथ र सहयोग निरन्तर राख्छु । जुनसुकै व्यवसायीहरुमाथि परेका समस्याहरुसँग जुध्न लागिरहन्छु । तर मलाई व्यवसायीहरुले जितको स्वाद चखाउनेछन् र नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने अवसर दिनेछन् ।
६) यसअघिको चुनावमा एउटै प्यानलमा रहनुभएका तपाइँको बाल्यकालदेखिको साथी निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहन प्रधानसँग लड्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
–सहन प्रधान मेरो सानैदेखिको साथी हो । उहाँलाई म सधैँ आदर सम्मान गर्छु । ५७ वर्षको संघको इतिहासमा एकपटक अध्यक्षमा पराजित भइसकेको मान्छे फेरि उठ्न आएका छैनन् । मलाई उहाँले साँच्चीकै आफ्नो मित्र ठान्नुहुन्छ भने वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्षको दावेदार रहँदै गर्दा उहाँ मसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउनु हुन्थ्यो वा हुन्थेन उहाँले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । यसमा मलाई दुःख लागेको छ ।
७) तपाइँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा व्यवसायी कर र नारायणी नदी किनारको टुङ्गो लाग्न सकेन नि ?
म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइरहँदा स्थानीय तह थिएन । जनताबाट जितेर आएका जनप्रतिनिधि नै नभएपछि उद्योग वाणिज्य संघले मात्र केही गर्न सकेन । त्यतिबेला म नेतृत्वमा पनि थिइनँ । नारायणी नदी किनारलगायतका सार्वजनिक जग्गाको विषयमा जनप्रतिनिधिले नै निर्णय गर्नुपर्नुे नियम छ । त्यसैले यसलाई मुर्त रुप दिन सकिएन । जनप्रतिनिधि आएपछि मेरो अगुवाईमा नारायणी नदी किनारको विषयमा पटकपटक कुरा भएको छ । मेयर रेनु दाहालसँग मैले धेरै पटक कुरा गरेको छु । व्यवसायीमाथि हुने अनेकौँ करको झमेला अवश्य हट्छ । यसमा म आशावादी छु । मैले जितेपछि यो समस्यालाई जोडतोडले उठाउनेछु । मेरो जितपछि ६ महिनाभित्र यो समस्या हल गर्नेछु ।